Huawei P40 PRO giveaway nweta otu kpamkpam na mfe !! | Gam akporosis
Huawei P40 PRO inye ego
Francisco Ruiz | | Huawei, Noticias
Zọ kacha mma iji malite ezumike dị ka Sọnde karịa ozi dị ka nke a, ị naghị eche? Ma ọ bụ na Huawei chọrọ inye ohere iji nweta ndị na-eso ụzọ ya na-enweghị atụ, ohere nke isonye na a Onyinye nke a ga-ekesa Huawei P40 PRO ole na ole.
Kedu ihe ị chọrọ isonye Huawei P40 PRO inye ego Kedu ihe mba dị iche iche China haziri ozugbo? Ọfọn, mgbe ahụ, m nwere ike ikwu na ị gaghị agbaghara nkọwa nke vidiyo na-esonụ, a video òkè abụọ òkè ebe ọ bụ na Aga m akuziri gị otu esi ebudata ma wụnye ngwa nke Huawei Assistant Today ọhụụ yabụ ịnwere ike ịnwale ma gwa anyị otu, kedu ihe ị chere maka nke a ọzọ na ndepụta Google a ma ama na ihuenyo ụlọ.
1 Chọrọ isonye na raffle
2 Gịnị kpatara vidio abụọ?
3 Otu esi esonye na eserese maka Huawei P40 PRO
Chọrọ isonye na raffle
Nanị ihe achọrọ iji nwee ike isonye na eserese maka Huawei P40 PRO a bụ na-enwe ọnụ ọgụgụ Huawei, inwe Huawei id gị kwekọrọ na ibudata Huawei Assistant Today ngwa ka ị nwee ike ịnwale ya na ngwaọrụ Huawei. ma hapụ okwu gị na weebụsaịtị Huawei.
Dabere na weebụsaịtị Huawei ebe a mara ọkwa Huawei P40 PRO, Huawei Asistant Today enwere ike itinye ya na EMUI 9.0 ma ọ bụ karịa, ọ bụ ezie na ejiri m nke ọma wụnye ya na Huawei MediaPAd M5 Lte nke na-aga n'ihu na gam akporo 8.0 na EMU 8.0 ya mere m ga - ekwu na o dakọtara site na EMUI 8.0 ma ọ dịkarịa ala ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ọ bụghị na arụmọrụ niile enyere anyị na EMUI 9.0 ma ọ bụ karịa.
Naanị nke a na ihe ọ bụla ọzọ, ọ dịghị mkpa ịgbaso Huawei na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ ọgụ ọ bụla ọzọ a na-ajụkarị anyị n'ụdị inye ego a.
Lee vidiyo abụọ nke m na-akọwa usoro iji soro ibudata ma wụnye Huawei Assistant Today ọhụrụ yana usoro iji soro isonye na Huaweu P40 PRO raffle. Ihe osise nke m debanyere aha m na nke m ga-achọ ka ị nwee obi ụtọ niile n'ụwa.
Gịnị kpatara vidio abụọ?
M na-ahapụrụ gị vidiyo abụọ, nke a na-echekwa na Huawei Mate 20 PRO nke m gosipụtara gị otu esi etinye Huawei Assistant Today na mgbakwunye na ihe niile EMUI 10 na-enye anyị na otu esi esonye na Huawei P40 PRO Onyinye Efu.
Mgbe ahụ, m ga-ahapụrụ gị vidiyo nke edere na ntanetị, ebe na mgbakwunye na ịkọwa otu esi esonye na eserese maka Huawei P40 PRO, Ana m egosikwa gị dịka ọ ga - ekwe omume ibudata ngwa ma wụnye ya na Huawei MediaPad M5 Lte na EMUI 8.0.
Na mgbakwunye, egosiri m gị na vidiyo otu esi ewepụ ngwa ahụ n'ụzọ ziri ezi n'oge ọ bụla ịchọrọ ịlaghachi na ntanetị Google site na ịpị aka nri na ihuenyo ụlọ.
Otu esi esonye na eserese maka Huawei P40 PRO
Will ga-ahụ njikọ nbudata na ụdị iji sonye na Huawei P40 PRO giveaway site na ịpị vidiyo ọ bụla ma tinye nkọwa ha.
Ekwadoro m na ọ bụrụ na ị gaa wụnye Huawei's Assistant Huawei Taa Nwere ike ịhụ vidiyo abụọ ka ị wee hụ na enwere ike itinye ya na EMUI 8.0 yana, ọ bụ ezie na arụ ọrụ nwere obere ihe jikọrọ ya na ihe enyere na nsụgharị EMUI ndị a.
E wezụga nke ahụ, m na-enyekwa gị ndụmọdụ n'ihi na Na vidiyo na nhazi ihu ala m na-egosi gị otu esi ewepụ ngwa ngwa Huawei Assistant Today ọ bụrụ na ọ bụ ikpe nke ịchọrọ iwepụ ya wee laghachi na ntanetị Google.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Huawei P40 PRO inye ego
Olee otú ndabere Telegram gị chats, foto na vidiyo
Otu esi echekwa batrị site na Google Chrome na gam akporo